COVID-19 ကာကွယ်ရေး၊ ငါးရိက္ခာများ စားသုံးပေး – Agri Digit News
Posted on Author adminComments Off on COVID-19 ကာကွယ်ရေး၊ ငါးရိက္ခာများ စားသုံးပေး
COVID-19 ကပ်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကာလအတွင်း ပြည်သူများ သည် မိမိတို့အိမ်အတွင်း နေထိုင်ကြရသဖြင့် စားသုံးသောအစားအစာများမှ အာဟာရဓာတ်မျှတစွာရရှိရေး ဂရုပြုစားသောက်ကြရမည်ဖြစ်ပြီး ငါးစားသုံး ပေးခြင်းဖြင့်လည်း ငါးတွင် ပါဝင်သော ဗီတာမင်-ဒီမှ ရောဂါပိုးများခုခံကာကွယ် ရေးနှင့် ကိုယ်ခံစွမ်းအားကောင်းမွန်ရေးအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေ ပါသည်။
ငါးရိက္ခာသည် ငတ်မွတ်မှုနှင့် အာဟာရဓာတ်ချို့တဲ့မှု တိုက်ဖျက်ရေး အတွက် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျက်ရှိပြီး ငါးအာဟာရဓာတ် သည် စားသုံးသူပြည်သူများအတွက် အသားဓာတ်အပြင် ကျန်းမာစေသော အဆီဓာတ်၊ အိုမီဂါ-၃ မပြည့်ဝဆီ၊ ကယ်လ်စီယမ်နှင့် သတ္တုဓာတ် များကိုလည်း ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပါသည်။
အိုမီဂါ-၃ မပြည့်ဝဆီပါဝင်သော အဆီဓာတ်ကြွယ်ဝသည့်ငါးများ၊ အကြေးခွံအရေပြားများနှင့် အရိုးပါဝါးစားနိုင်သော ငါးငယ်လေးများတွင် ပါရှိသည့် အာဟာရဓာတ်များသည် အစားထိုးမရနိုင်သော အာဟာရ တန်ဖိုးများဖြစ်ပါသည်။
ငါးသည် ဈေးနှုန်းသင့်တင့်စွာဖြင့် အများပြည်သူဝယ်ယူစားသုံးနိုင် သည့် အာဟာရဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ငါးစားသုံးခြင်းဖြင့် ငါးအာဟာရ ဓာတ်မှ ဗီတာမင်-ဒီနှင့် ဇင့်ဓာတ်ရရှိခြင်းဖြင့် ကိုယ်ခံစွမ်းအားကောင်းမွန်စေ ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါနှင့် လေဖြတ်ခြင်းအန္တရာယ်ကို လျှော့ချစေနိုင်ခြင်း၊ ဦးနှောက် ကျန်းမာရေးကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ အမြင်အားကောင်းစေခြင်း၊ အရိုးအကြော နှင့်ကြွက်သားသန်မာစေခြင်း၊ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါမှ ကာကွယ်နိုင်ခြင်း၊ အရိုးအဆစ်ရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေခြင်း၊ ဆီးချိုရောဂါမှကာကွယ်စေနိုင် ခြင်း၊ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကာကွယ်စေနိုင်ခြင်း၊ လမစေ့ဘဲကလေးမွေးဖွားခြင်းကိုလျှော့ချစေနိုင်ခြင်း စသည့်အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါ သည်။
FAO ၏ သတင်းအချက်အလက်ကိန်းဂဏန်းများအရ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ၃ ဒသမ ၁ ဘီလီယံကျော် လူသားများသည် တိရစ္ဆာန်မှရရှိသော အသားဓာတ် စုစုပေါင်း၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ငါးမှရရှိသော ငါးရိက္ခာအပေါ် မှီခိုစားသောက် လျက်ရှိကြပါသည်။ ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း၌ လူတစ်ဦးလျှင် ငါးစားသုံးမှု ကိုးကီလိုဂရမ်ရှိခဲ့ရာမှ ယနေ့ချိန်ခါတွင် လူတစ်ဦးလျှင် ငါးစားသုံးမှု ၂၀ ကီလိုဂရမ်အထိ မြင့်တက်လာပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များသည် ၎င်း၏ ရင်သွေးငယ်များ အာရုံကြော ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် ငါးများကို စားသုံးပေးသင့်ပါသည်။ ငါးတစ်ကောင်လုံး၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သော ဦးခေါင်းပိုင်း၊ အတွင်းကလီစာနှင့် ကျောရိုးများသည် တန်ဖိုးနည်းအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် အဏုအာဟာရ တန်ဖိုးများ မြင့်မားစွာပါဝင်ပါသည်။
ငါးနှင့်ပင်လယ်စာတွင် အဓိကတွေ့ရှိရသော အိုမီဂါ -၃ မပြည့်ဝဆီများ သည် ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။ ငါးအာဟာရမှာ ပါဝင်သော အိုင်အိုဒင်းဓာတ်သည် သိုင်းရွိုက်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကူညီပေးသကဲ့သို့ များစွာသော ပံ့ပိုးမှုများလုပ်ဆောင်ပေးပြီး အာရုံကြော ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဓာတ်ဖြစ်ပါသည်။ ဗီတာမင်-ဒီ ဓာတ်သည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ငါးတွင်ပါဝင်သော နောက်ထပ် အရေးပါသည့် အာဟာရဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ရောဂါပိုးကို ခုခံနိုင် သော ကိုယ်ခံစွမ်းအားများ ကောင်းမွန်ရေးအတွက် ထိန်းညှိပေးပြီး အရိုး အဆစ်များ ကျန်းမာရေးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အာဟာရဓာတ် ဖြစ်ပါသည်။ သံဓာတ်သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်များကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အာဟာရဓာတ်ဖြစ်ပြီး ငါးတွင်ပါဝင်သော သံဓာတ်ရရှိ ခြင်းဖြင့် မိခင်မှ ၎င်းနှင့်ကလေးအတွက် ထပ်မံလိုအပ်သော သွေးများကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ငါးတွင်ပါဝင်သော ကယ်လ်စီယမ်၊ ဇင့်နှင့် အခြား သော သတ္တုဓာတ်များသည် ငါးအာဟာရဓာတ်ဖြင့် ကလေးဖွံ့ထွားမှုကို နှေးကွေးစေနိုင်သော ကယ်လ်စီယမ်နှင့် ဇင့်ဓာတ်ချို့တဲ့မှုကို ဖြည့်တင်းပေးနိုင် ပါသည်။
ငါးတစ်ကောင်တွင် ပါဝင်သော အာဟာရတန်ဖိုး
ငါးတစ်ကောင်တွင် ပျမ်းမျှအာဟာရတန်ဖိုးအားဖြင့် အသားဓာတ် (ပရိုတင်း) ၂၅ ဂရမ် ရပြီး ကယ်လိုရီမှာ ၂၃၀ ရရှိပါသည်။ ပိုတက်ဆီယမ် ၄၃၃ မီလီဂရမ်၊ ကယ်လ်ဆီယမ် ၁၇ မီလီဂရမ်နှင့် ကိုလက်စထရော ၇၁ မီလီဂရမ် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ငါးအာဟာရမှ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် ရရှိနိုင်မှုမှာ (၀) ဖြစ်ပါသည်။ ငါးအမျိုးအစားအလိုက် ပါဝင်သည့် ပရိုတင်းဓာတ်များမှာ အဖြူရောင်အသားရှိသော ရေယက်ပါငါးများတွင် အသားဓာတ် ၁၆-၁၉ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ပြီး အဆီဓာတ်ကြွယ်ဝသည့် ရေယက်ပါငါးများတွင် ပရိုတင်း ဓာတ် ၁၈-၂၁ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်ပါသည်။ ပုစွန်ကဏန်းကဲ့သို့ အခွံပါ ရေနေ သတ္တဝါများတွင် အသားဓာတ် ၁၈-၂၂ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်ပါသည်။ ခုံးကမာမျိုး များတွင် အသားဓာတ် ၁၀-၁၂ ရာခိုင်နှုန်းပါရှိပြီး ရေဘဝဲနှင့် ပြည်ကြီးငါးအုပ်စု များတွင် အသားဓာတ် ၁၆-၁၈ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပါဝင်ပါသည်။
ငါးအာဟာရဓာတ်များတွင် မပြည့်ဝဆီများမှာ ပါဝင်သည့် အိုမီဂါ -၃ မပြည့်ဝဆီများဟု ခေါ်သည့် EPA နှင့် DHA မပြည့်ဝဆီအုပ်စုသည် ဦးနှောက် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ EPA နှင့် DHA မပြည့်ဝ ဆီအုပ်စုသည် အထူးသဖြင့် ပင်လယ်ငါးများဖြစ်သည့် ငါးကွမ်းရှပ်၊ ဆော်လမွန်၊ ဟာရင်း၊ ငါးနီတူ၊ ကျူနာ၊ ကမာ၊ ကဏန်းနှင့် ပုစွန် အမျိုးမျိုးတို့တွင် မြင့်မားစွာပါဝင်ပါသည်။ ပင်လယ်ငါးအာဟာရနှင့်ပတ်သက်ပြီး EPA နှင့် DHA မပြည့်ဝဆီရရှိမှုအကျိုးကျေးဇူးအနေဖြင့် ကြားသိရသည့် ဗဟုသုတများအရ ပင်လယ်ငါးအစားများသည့် အက်စကီးမိုးလူမျိုးများနှင့် ဂျပန်လူမျိုးများသည် EPA နှင့် DHA မပြည့်ဝဆီ အာဟာရဓာတ်ရရှိမှုနှင့် ဆက်စပ်ပြီး နှလုံးရောဂါနှင့် လေဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပွားမှုနည်းပါးကြောင်း သိရှိထားကြပါသည်။
လေ့လာသိရှိထားချက်များအရ ငါး(၁၀၀)ဂရမ်တွင် အသားဓာတ် ၁၅-၂၀ ဂရမ် ပါဝင်ပြီး လူတစ်ဦးသည် ၎င်း၏ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်အလိုက် တစ်ကီလို ဂရမ် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်အတွက် အာဟာရဓာတ်ချို့တဲ့မှုကို ရှောင်ရှားရန် နေ့စဉ် ၀ ဒသမ ၆၆-၀ ဒသမ ၈၇ ဂရမ် လိုအပ်ပါသည်။ အကြံပြုချက်များအရ အရွယ်ရောက်အမျိုးသား/အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် တစ်ရက်လျှင် အသားဓာတ် (ပရိုတင်း) ၄၅-၆၅ ဂရမ်အထိ စားပေးသင့်ပြီး ဆက်စပ်၍ ငါး ၁၀၀ ဂရမ် စားသုံးပေးခြင်းဖြင့် နေ့စဉ်အသားဓာတ်လိုအပ်မှု၏ ၁၅-၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ဖြည့်တင်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အိုမီဂါ-၃ မပြည့်ဝဆီများ (EPA + DHA) သည် ငါး ၁၀၀ ဂရမ်တွင် ၎င်းဓာတ် ၁၁၈-၂၀၀၀ မီလီဂရမ်အထိ ပါဝင်ပြီး အာဟာရဓာတ်ချို့တဲ့မှုကို ရှောင်ရှားရန် နေ့စဉ် ၂၀၀-၄၀၀ မီလီဂရမ် လိုအပ်ပါသည်။ ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ်သည် အရိုးပါစည်သွပ်ငါး ၁၀၀ ဂရမ်တွင် ၂၅၀-၃၈၀ မီလီဂရမ် ပါဝင်ပြီး အာဟာရဓာတ်ချို့တဲ့မှုကို ရှောင်ရှားရန် နေ့စဉ် လူတစ်ဦး သည် ၄၀၀-၁၀၀၀ မီလီဂရမ် လိုအပ်ပါသည်။ အိုင်အိုဒင်းဓာတ်သည် ငါးအသားလွှာ ၁၀၀ ဂရမ်မှာ အိုင်အိုဒင်း ၃၀-၁၂၇၀ မိုက်ခရိုဂရမ်အထိ အမျိုးမျိုးပါဝင်ကြပြီး အာဟာရဓာတ်ချို့တဲ့မှုကို ရှောင်ရှားရန် လူတစ်ဦးသည် နေ့စဉ် ၁၂၀-၁၅၀ မီလီဂရမ် လိုအပ်ပါသည်။ သံဓာတ်သည် ငါး ၁၀၀ ဂရမ်တွင် သံဓာတ် ၀ ဒသမ ၃၆-၃ ဒသမ ၃ မီလီဂရမ်အထိပါဝင်ပြီး အာဟာရဓာတ်ချို့တဲ့ မှုကို ရှောင်ရှားရန် လူတစ်ဦးသည် နေ့စဉ် ၃-၈ ဒသမ ၁ မီလီဂရမ်လိုအပ်ပါသည်။ ဗီတာမင်-ဒီဓာတ်သည် ငါး ၁၀၀ ဂရမ်တွင် ၅၀-၁၀၀၀ IU အထိ ပါဝင်ကြပြီး အာဟာရဓာတ်ချို့တဲ့မှုကို ရှောင်ရှားရန် လူတစ်ဦးသည် နေ့စဉ် ၂၀၀-၈၀၀ IU လိုအပ်ပါသည်။ ထပ်မံအကျိုးရှိမှုများ လိုအပ်ပါက ဗီတာမင်-ဒီ ၁၀၀၀ IU ကို နေ့စဉ်သုံးစွဲရန် လိုအပ်သည်ဟု သိရှိရပါသည်။
COVID-19 ကပ်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကာလအတွင်း ပြည်သူများ မိမိတို့အိမ်အတွင်း နေထိုင်ကြရချိန်တွင် စားသုံးသောအစားအစာများမှ အာဟာရဓာတ် မျှတစွာရရှိနိုင်စေရန် ငါးစားသုံးခြင်းသည် ကျန်းမာရေး (အထူး သဖြင့် ကိုယ်ခံအားကောင်းမွန်ရေး) အတွက် အကျိုးရှိပါသဖြင့် ပြည်သူများ ငါးစားသုံးကြပါရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါသည်။ ။
မှီငြမ်းကိုးကား – 1. Training manual on seafood value addition, ICAR-Central institute of fisheries technology-2018
3. Malaysian Journal of Halal research journal -2019
4. Advances in fish Research, Volume-VII, Page-189-218
၉-၆-၂၀၂၀နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာမှ ကူးယူဖော်ပြသည်။